Hole Saw, Saw Blade, drill Bit-Guanghua
Ubulumko buthatha uxanduva lwethu lokukhusela indalo. Ngokupheleleyo sibeka i-1.5million yeedola ukuthenga izixhobo zobungcali: ukuchitha amanzi, igesi yeflue, umsi kunye nenkqubo yonyango yenkungu.
Ukunciphisa ukusetyenziswa kombane kunye nokusetyenziswa kwamalahle, sityale i-1.5million yeedola ukulungiselela iseti yamandla elanga, egubungele ama-26,500i-CM2 kwaye yavelisa i-2.5million KWH / ngonyaka.
Isixhobo sokulinganisa umfanekiso
Womsebenzi Buyisela Saw Blade
Izinto eziluncedo ekubuyiseleni ubuchule besarha blade ● 2TPI ene-9-intshi, i-12 intshi kunye ne-18-intshi ubude ● Iibhloko ziyi-carbide edityaniswe nesinyithi esikhethekileyo sokusika amandla kunye nokunceda k ...
Isixhobo esingenasimahla sokukhupha iArbor (iPatent isalindile)
Izinto eziluncedo ze Arbor New l Nikela ikhola entwasahlobo-ilayishe ezenza ngokuzenzekelayo izikhonkwane zokuqhuba ukukhusela iisarha zomngxunya ekutshixeni kwi-mandrel l Steel kunye nolwakhiwo lwe-ABS lwenza i-arbor m ...
Utshintsho olukhawulezayo lweArbor
Izinto eziluncedo nge-arbor entsha ● I-Abor enye ilingana kuyo yonke imingxunya esar 1-1 / 4 in. Kwaye inkulu. ● Inkqubo ye-mandrel yokutshixa yotshintsho olukhawulezileyo nolulula ngaphandle kwexesha eliphantsi ● Ukusebenza ngaphandle kwesixhobo. Universa ...
Isixhobo esingenasixhobo sokukhulula ngokukhawuleza
Utshintsho olukhawulezayo lwe-arbor (ilungelo elilodwa lomenzi)